Osmaniye DüziçiDüldülတောင်ကြိုးကြိုးစီမံကိန်းအတွက်အထူးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် - RayHaber
Homeအထွေထွေအထူးသတင်းများOsmaniye Düziçi Jolly တောင်တန်း Cableway စီမံကိန်း (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး
22 / 12 / 2017 Levent Ozen အထူးသတင်းများ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
စာချုပ်အပေါ် osmaniye Düziçiနွားမတောင်တော်သို့ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုသီးသန့်သတင်းအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
အရာရောက်လေ၏ Jolly ကုမ္ပဏီကြီးစက်ရုံ Osmaniye Düziçiလက်မှတ်ပေါင်းများ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းမှတွေ့ရှိခဲ့တောင်ပေါ်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ Bartholet လေလံပွဲနည်းလမ်း AG ကများကကောက်ယူသည့်လေလံအတွက်အကောင်းဆုံးလေလံပေး - အရန်းအဆောက်အဦး cableway မိတ်ဖက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးစာချုပ်လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဆောက်လုပ်ရေးစတင်မည်ပြီးနောက်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ 58.150.000, Jolly တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားထဲတွင် TL စီမံကိန်းကိုတစ်ပျော်ပွဲစားသောဧရိယာနှင့်အတူကျင်းပနှင့်စီစဉ်ထားနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအားဆက်လက်ပါလိမ့်မည်, ဒီစက်ရုံဧရိယာရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေရာများကို၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်
Barholet အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတူရကီမှ General Manager Ahmet Couldnt အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်: အစီစဉ်ထားနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းနှင့်အတူ LIFT နှင်းလျှောစီးဖို့အရာ, အပန်းဖြေဒေသများနှင့်Düziçiဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအလွန်အရေးကြီးသောစင်တာဖြစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းကို5အဆောက်အတစ်ရက်တထောင်ကလူသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, Osmaniye တစ်စီမံကိန်းများအတွက်အလွန်အထူးဒီဇိုင်းစက်ရုံဆွစ်ဇာလန် Barholet ကုမ္ပဏီကမ္ဘာပေါ်မှာတက်ကြွစွာအလားတူစီမံကိန်းများနှင့်အတူအားလုံးနီးပါးနိုင်ငံများတွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်ပူဇော်လိမ့်မည်ဟုစီးပွားရေးနှင့်လုံးဝနီးပါး smokeless မှပံ့ပိုးမှုများsağlayacak.yအသစ်ကအလုပ်အကိုင်တံခါးများဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ တူရကီအတွက် Ilgaz မီနှင့်စီမံကိန်းများကို Vadinstanbul Ahmed ကဂိတ်များနဲ့အောင်မြင်မှုဖျော, သူတို့ကမကြာမီဤစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို share ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာ 1,5-2 နှစ်များတွင်အဆိုပါစီမံကိန်းပြီးပါကနေဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Osmaniye ၏မြူနီစီပယ်နှင့် Jolly တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလုပ်ဖို့စီမံကိန်းအားAmanoslar'ıနှင့်လမျးလြှောကျသှားခွငျးအတွက်ပထမနေရာအတွက်ခွဲဝေစရိတ်ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိမ့်Düziçi။ တည်ဆောက်-operate-လွှဲပြောင်းဖို့ယခုနှစ် 29 အမြင့်အတွက်2200 အတွက်တောင်တော်ခရိုင်တထောင်မီတာတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူမော်ဒယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကေဘယ်လ်ကားစနစ်သိုလိမ့်မည်တဲ့နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်! ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီကြီး 90 နှင့်အတူလူယူနိုငျသညျ, 5,4 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးစနစ်အတွက်ပိုပြီးလူများတစ်နာရီကနေပြောင်းရွေ့နိုင်ပါတယ်အကြောင်းကို 400 ကီလိုမီတာအရှည်ရပါလိမ့်မယ်။
Düziçiမြို့တော်ဝန်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော, belitti ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအပန်းဖြေဧရိယာတည်စေမည်Ökkeşတစ်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဒီဧရိယာထဲမှာဧရိယာစားသောက်ဆိုင်များ, ကဖေး, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများကအစားသူတို့ကျနော်တို့လူတွေကိုဖော်ပြ6အတွက် Boutique ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်လာမယ့်ကာလအတွက် 50 တထောင်စတုရန်းမီတာveyaklaşıkဟာလမျးလြှောကျသှားခွငျးမှလုပ်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
cable ကိုကားတစ်စီး၏Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား) 11 / 09 / 2017 Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်သိပ္ပံပညာ၏ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာတွင် cableway စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်DÜZİÇİစည်ပင်သာယာနှင့် 4734 အပိုဒ်၏ပုဒ်မခွဲအီးနှင့်အညီညှိနှိုင်း၏ရုံးအသုံးစရိတ်အာဏာပိုငျမြားဆောကျမှု (DÜZİÇİDÜLDÜL Mountain သဘာဝနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဗဟိုဌာန TELPHER စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ) ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 21 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်, ထိုသို့ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 437326 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: REFIK Brave Boulevard 710 80600 DÜZİÇİ / OSMANİYEခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ် Hurriyet ရပ်ကွက်အတွင်း: 3288761008 - 3288761578 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
Düziçiမြို့တော်ဝန်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားÖkkeş: Jolly တောင်တန်း Cable ကိုမော်တော်ကားအိပ်မက် Reality ဖြစ်လာ 15 / 03 / 2012 ငါ၏အအိပ်မက်မှ jolly တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုခဏတစ်လွန်ခဲ့သူတစ်ဦးကကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်းDüziçiစီမံကိန်း၏ပြင်ဆင်မှုများအတွက်သြဒီနိတ်ပေးထားသောကြောင့်မြို့တော်ဝန်Ökkeşနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဟုပြောသည်။ အဆိုပါအိပ်မက်, Düziçiယင်းမြို့တော်ဝန်စီမံကိန်းများ၏သဘောပေါက်ထိရောက်သောအလုပ်နှင့်Ökkeşနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားထွက်သယ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်နှင့်အတူကျင်းပ, "ငါသင်တို့သည်ငါတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်မစ္စတာဘာသာရပ်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ သူတို့ကထောက်ခံကြသည်။ jolly တောင်တန်း cableway စီမံကိန်း၏ပြင်ဆင်မှုများအတွက် စတင်. နှင့်အဆုံးသတ် point ရဲ့သြဒီနိတ်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းပြီးစီးမှတဆင့်ထိုကဲ့သို့စီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်အယူခံင့်Doğaka။ Düziçiအသစ်အလုပ်အကိုင်များကိုဆိုလိုသည်, Osmanabad နှင့်Düziçiခရီးသွားလုပ်ငန်း, မြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ "Cableway, ဝေးချင်းစီကတခြားကနေပြော Jolly တောင်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဆိုလိုတယ် ...
cable ကိုကားတစ်စီး၏Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး 22 / 09 / 2017 Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်သိပ္ပံပညာ၏ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာတွင် cableway စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်DÜZİÇİစည်ပင်သာယာနှင့် Office အသုံးစရိတ်အာဏာပိုငျမြားဆောကျမှု (DÜZİÇİDÜLDÜL Mountain သဘာဝနှင့်ဆောင်းရာသီ TELPHER စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ) ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 21 အပိုဒ်အပိုဒ်အီးသည်နှင့်အညီပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေညှိနှိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရေတွက် ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 455687 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: REFIK Brave Boulevard 710 80600 DÜZİÇİ / OSMANİYEခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ် Hurriyet ရပ်ကွက်အတွင်း: 3288761008 - 3288761578 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား) 11 / 09 / 2017 Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်သိပ္ပံပညာ၏ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာတွင် cableway စက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်DÜZİÇİစည်ပင်သာယာနှင့် 4734 အပိုဒ်၏ပုဒ်မခွဲအီးနှင့်အညီညှိနှိုင်း၏ရုံးအသုံးစရိတ်အာဏာပိုငျမြားဆောကျမှု (DÜZİÇİDÜLDÜL Mountain သဘာဝနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဗဟိုဌာန TELPHER စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ) ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 21 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်, ထိုသို့ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 437326 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: REFIK Brave Boulevard 710 80600 DÜZİÇİ / OSMANİYEခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ် Hurriyet ရပ်ကွက်အတွင်း: 3288761008 - 3288761578 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဒီဇင်ဘာလ 23 1888 Haydarpasa-အစ္စတန်ဘူလ် ...
cable ကိုကားတစ်စီး၏Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား)
Düziçiမြို့တော်ဝန်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားÖkkeş: Jolly တောင်တန်း Cable ကိုမော်တော်ကားအိပ်မက် Reality ဖြစ်လာ
cable ကိုကားတစ်စီး၏Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: cable ကိုကားတစ်စီး၏Düziçi Jolly တောင်သဘာဝတရားနှင့်ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Center က Facility ဆောက်လုပ်ရေး
Büyükalaca Project မှကျေးဇူးတင်ဖို့အထောက်အကူပေးသော jolly တောင်တန်း Cableway
အနိုင်ရလေလံနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုး TCDD လမ်းမကြီးစက်မှုလယ်ယာစီမံကိန်းစာချုပ်တစ်ခုစာချုပ်ကုမ္ပဏီ Plasser Theurer လက်မှတ်ရေးထိုး
jolly တောင်တန်း Cable ကိုမော်တော်ကားအိပ်မက် Reality ဖြစ်လာ
jolly တောင်တန်း Cable ကိုကား Project မှနောက်ဆုံးအချက်ရောက်ရှိ